९ वर्षदेखि गोठमा बास » खबरहरुको एउटै केन्द्र
९ वर्षदेखि गोठमा बास
सोमबार, चैत्र २८, २०७३ १०:२२ मा प्रकाशित !
२८ चैत​, जुम्ला । तिला गाउँपालिका–३ दानीवाडा गाउँबासी ६५ वर्षीया एक महिला ज्वाला तिरुवा नौ वर्षदेखि गोठमा बस्दै आएकी छिन्।
तेह्र वर्षअघि श्रीमान गुमाएकी उनी घरबारविहीन अवस्थामा छिन । छोरा लङ्क तिरुवा गर्भे टुहुरा बनेको थियो । श्रीमान बितेको तीन वर्षपछि उनले पेट पाल्नका लागि अर्को विवाह गरिन । विवाह भएको दुई वर्षसम्म दोस्रो श्रीमान्सँग बसे पनि उनले त्यहाँ सम्मानयुक्त जीवन जीउन नसकेपछि पुनः पहिलेकै घर दानीवाडा गाउँमा फर्कीन ।
अहिले उनको साथमा १२ वर्षको छोरा छ । विडम्बना, न उनको नाममा कुनै जग्गा घर छ न त छोराको नाममा नै । दोस्रो विवाह गरेपछि जग्गा कसले कहाँ कसरी उपयोग गरेको छ भन्ने थाहा छैन, उनलाई । मात्र अर्काकोमा ज्याला गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी छन उनले ।
पशुसरह जीवन जिउन बाध्य ज्वालाका बारेमा कुनै सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । उनको खान, बस्न र बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको साविकको कुडारी गाविसका सामाजिक परिचालिका सन्तोषी महतले बताइन ।
परिचालिका महतले उनको सहयोगका लागि भर्खरै मात्र रु १० हजार २४० आर्थिक सङ्कलन गरेको बताइन । “उनको बस्ने घर निर्माण र सम्मानयुक्त नागरिक जीवन स्थापितका लागि आर्थिक सङ्कलनमा लागिपरेकी छु” – उनले भनिन । परिचालिका महतले ज्वालाको जीवनका बारेमा सोचिदिन सबै सरोकारवालाहरुलाई आग्रह पनि गरेकी छन ।
PREVIOUS POST Previous post: बस दुर्घटना हुँदा ३३ जना घाइते
NEXT POST Next post: आत्मघाती कार बम विस्फोट गराउँदा कम्पन उत्पन्न​
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, चैत्र २८, २०७३ १०:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, चैत्र २८, २०७३ १०:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, चैत्र २८, २०७३ १०:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, चैत्र २८, २०७३ १०:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, चैत्र २८, २०७३ १०:२२